Photo Editing Software muZimbabwe
Iyo Yakanakisa Photo Editing Software Kune Vanotanga
Sezvinoreva zita iri, Adobe Photoshop Express ihuremu-huremu, webhu bhurawuza-yakavakirwa vhezheni yeAdobe yepasirese inozivikanwa pikicha software. Zvinoshamisika kuti inouya neakakura maturusi pane iyo yemahara kurodha pasi Photoshop Express chirongwa, asi zvakadaro, inongotsigira mifananidzo kusvika pahukuru hwese hwe16 MB. Panguva imwecheteyo, unogona kuwana mamwe maapplication pamutengo wakaderera. Isu tinoona kuti Google AppInk uye Facebook Elements 10 inopa kungoita akawanda maficha pamutengo wakaderera. Ose ari maviri anowanikwa kurodha mahara pawebhu.
Chimwe chinhu chakakosha cheichi chirongwa chemahara ndechekuti inotsigira mazhinji eanowanzozivikanwa maitiro se, blur, dura, kutendeuka, auto auto, kumashure musanganiswa, kupenya kuzadza, deskewing, overlay, bevel, curve, uye kupisa-mukati. Nekudaro, iyo inopa mashoma masarudzo emifananidzo masiki, zvitambi, uye maturu ekushandisa. Nekudaro, kunyangwe ichikwanisa kuita mamwe ekutanga ekugadzirisa mapikicha maturusi, haina mhando dzakasiyana uye zvirokwazvo haina hunyanzvi mhedzisiro iwe yaungade.
Iyo yakanakisa uye yekupedzisira foto yekugadzirisa software inofanirwa kukupa iwe yakawanda yezvinhu zvekugadzira kuti ugadzirise mifananidzo yako ive nyore uye nekuwedzera kugadzira. Vazhinji vane hunyanzvi vemifananidzo vanotora kuti Fotor ndiyo yavo yavanofarira software yekugadzirisa mifananidzo. Kunyange hazvo mazhinji emaapps ePhones uye ePadad asiri emahara, Fotor inokutendera kuti ugadzirise zvese zviripo uye vhidhiyo nyore. Imwe yemaitiro anonyanya kunakidza anoitwa naFotor ndeyekuti anokupa mukana wekubaya mifananidzo uchiichengeta munzvimbo dzayo dzepakutanga. Izvi zvinoita kuti zvikwanise kushandisa matekiniki ekugadzira ekugadzira, senge kuburitsa mukati nekunze, uye zvinogadzira zvimwe zvehunyanzvi hunyanzvi mhedzisiro iwe yaunowana.
Rakareba runyorwa rwezvinhu zvitsva zvinoita kuti Fotor ive yakanaka kwazvo mhariri yemifananidzo. Iwe unogona kushandisa dzakasiyana siyana mhedzisiro kuti utorezve uye gadzirisa mapikicha. Kana iwe uchida kuita kuti zvinyorwa zvinyangarike kana kuita kuti kumashure kunyangarika zvachose, Fotor inokwanisa kuitisa iyo futi. Kana iwe uri kushanda pane panoramic foto, iwe unogona nyore kutenderera iwo mufananidzo kune square fomu kana kuiflaya iyo imwe nzira yakatenderedza. Kunyangwe iwe uri kushanda nepikicha diki, iwe unogona achiri kuita kuti iratidzike sehunyanzvi sezvaungaita dai iwe uine iyo yese foto iri muruoko rwako.
Zvimwe zveapamberi ekugadzirisa maficha anosanganisira: matanda, grids, smart filters, retouching brushes, merge maturusi, uye zvakashata matanda. Zvese izvi zvishandiso zvinogona kushandiswa nepazere palette yemavara. Photor's photo editing software ine zvipingamupinyi zvishoma, zvisinei, senge chokwadi chekuti haugone kugadzira slideshow. Zvakare, vatangi vanogona kuona kuti inoonekwa interface inogona kuve yakanyanya kuomarara. Vamwe vanhu vanoti vanotanga vanogona zvakare kuomerwa nekugadzirisa maratidziro emifananidzo pane mamwe emifananidzo yavo yavanofarira. Zvakadaro, Fotor ndeimwe yesarudzo dzakanakisa kune vanotanga sezvo zviri nyore kwazvo kudzidza nekushandisa.
Photo Edhirowa Pro ndeimwe yakatemerwa mutengo, asi hunyanzvi hwekugadzira mapikicha software iwe yaunogona kurodha mahara kubva kune yayo webhusaiti. Muzhinji, Photo Editor Pro inopa zvimwe zvakafanana kuzvirongwa zvinodhura zvataurwa pamusoro, kunze kwekunge zviripo mahara pane webhusaiti yeAdobe. Kana iwe uchinyatsoda chimwe chinhu chinonakidza uye shanduko, iwe unofanirwa kunyatso tarisa chirongwa ichi. Photo Editor Pro inopa epamberi maficha ayo anokatyamadza uye kukushamisa iwe. Ukangotanga kushandisa Photo Edhita Pro, iwe unozoona kuti makwikwi ekufunda curve anga asingadi zvachose.
Pakati pezvirongwa zvakanakisa zvevatangi vekutanga, pane chimwe chirongwa chiri chitsva asi chatova chakakurumbira pakati pevanyanzvi: Photoscape X. Kana iwe uchifarira basa rekuzvimiririra kana kutengesa mapikicha emastock online, ungangoda kutarisa Photoscape X pane mamwe mapurogiramu. Iyo, pamwe, yakanakisa yekugadzirisa mapikicha software kune vanotanga. Iine maficha ese auchazoda uye akasununguka zvachose!
Iwo akanakisa ekugadzirisa mapurogiramu esoftware anogona kuuya nenzira dzakasiyana uye saizi. Dzimwe dzakakodzera mahunyanzvi, nepo dzimwe dzingave dzakakodzera maamateurs. Ingo rangarira kuti chero chirongwa chaunoshandisa, iwe wakasununguka kusarudza kubva kune chero nhamba yezvinonakidza uye zvinoshanda mafomu. Iwe unongo fanirwa kuve nechokwadi chekuti iyo yaunotora ndeyechokwadi yakanakisa yekugadzirisa mapikicha software kune vanotanga.